Guudmarka Gelken - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2012, Gelken Gelatinwaa soo saare xirfadle ah soosaarida gelatin Daawooyin tayo sare leh, Jelatin la cuni karo iyo kolajiin biyo leh. Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dawada, kaabsulka, warshadaha cuntada, waxyaabaha la isku qurxiyo, wax soo saarka caafimaadka iyo warshadaha kale.
Iyadoo ay weheliso si buuxda kor loogu qaadayo khadka wax soo saarka tan iyo sanadkii 2015, xaruntayadu waxay ku jirtaa heerka ugu sarreeya adduunka. Waxaan haynaa nidaam maareyn tayo leh oo dhameystiran iyo nidaamka maareynta badbaadada cuntada oo ay cadeysay ISO9001, ISO22000, FSSSC22000, GMP. Kooxdayada wax soo saar waxay ka socdaan warshad gelatin sare leh khibrad 20 sano ah. Hadda waxaan haynaa 3 khad soo saaris gelatin ah oo leh sanadkiiba 15,000 tan iyo hal khad Hydrolyzed Collagen ah oo leh 3000ton sanadle ah.
Our QA / Nidaamka QC xirfadeed iyo in ka badan 400 oo ka mid ah SOP loo hubiyo in ay bixiyaan xasilloon, nabad ah, waxyaabaha dabiiciga ah iyo caafimaad in our macaamilka. Heerka tayada ayaa la kulmaya GB6783-2013, farmashiyaha Shiinaha, USP, EP. Iibkayagu wuxuu daboolayaa Shiinaha oo dhan, USA, Yurub, Kuuriyada Koonfureed, Hindiya, Koonfur-bari Aasiya iyo daraasiin waddamo ah.
Waxaa la aasaasay 2012, Gelken Gelatin waa soo saare xirfadle ah soosaarka gelatin Daawooyin tayo sare leh, Gelatin la cuno iyo kolajiin biyo leh.
Iyadoo ay weheliso si buuxda kor loogu qaadayo khadka wax soo saarka tan iyo sanadkii 2015, xaruntayadu waxay ku jirtaa heerka ugu sarreeya adduunka. Waxaan haynaa nidaam maareyn tayo leh oo dhameystiran iyo nidaamka maareynta badbaadada cuntada oo ay cadeysay ISO9001, ISO22000, FSSC22000, GMP, "Shatiga Waxsoosaarka Daroogada" iyo "Shatiga Soosaarka Cuntada Cunitaanka" oo ay soo saartay Maamulka Cuntada iyo Dawada. Kooxdayada-soo-saarka ay ka soo warshad gelatin top 20 sano oo waayo-aragnimo. Haatan waxaan haynaa 3 wax soo saar gelatin ah oo leh awood sanadle ah oo ah 1 5,0 0 0 tan iyo hal khad Hydrolyzed Collagen oo leh awood sanadle ah 3000ton
Waxyaabaha loo yaqaan 'gelken' ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa kaabsulyada adag, kaabsulka jilicsan, kiniiniyada, nacnaca cirridka, ham, yogurt, mousses, biirka, casiirka, waxyaabaha qasacadaysan, nafaqada dheeriga ah, cuntooyinka caafimaadka, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, sausages
Hadafkeenu waa in aan siino alaab aamin ah, tayo sare leh oo xasiloon oo saldhig u ah baahida macaamiisha. Waxaan qaadeynaa dhammaan mas'uuliyadda alaabtayada iyo adeeggayaga, si aan u noqonno alaab-qeybiye lagu kalsoon yahay oo lagu kalsoon yahay berrinka gelatin iyo kolajka
Waxaa lagu aasaasay magaalada Xiamen, Fujian.
Ka bilow wax soo saarka gelatin ee Xiapu, Ningde, Fujian. Iyadoo 20 sano ah kooxda R&D.
wax soo saarka ee gelatin gaadhay 10000 MT.
KAIPPTAI ayaa waxaa la aasaasay, bilaabaan wax soo saarka Collagen ah.
wax soo saarka The sanadlaha ah ee Collagen gaadhay 3000 MT.
Qaab dhismeedka warshadaha ayaa la dhammaystiray iyo jihada horumarinta tobanka sano ee soo socota ayaa la go'aamiyay.
Soosaarka Sannadlaha ah ee Gelatin wuxuu gaaraa illaa 15000 MT.